यी महिला रुखसँग विवाह गर्दै, कारण जान्नु भयो भने पर्नुहुनेछ छक्क ! - Babal Khabar
एजेन्सी । तपाईले समलिंगी विवाह त सुन्नुभएकै होला । तर, रुखसँग विवाह पक्कै सुन्नुभएको छैन होला ।
अस्ट्रेलियाका एक महिलाले पुरुषसँग होइन रुखसँग विवाह गर्ने फैसला गरेकी छिन् । एम्मा नामकी महिलाले रुखको नाम टिम राखेकी छिन् ।
उनले कुनै पुरुषको साथमा भन्दा रुखसँग सम्बन्ध राखेकोमा खुशी भएको बताएकी छिन् । एम्माले कुनै पुरुषले दो’स्तीको रुपमा अफर गरेपनि आफुले अस्विकार गर्ने जानकारी दिएकी थिइन । उनको यस्तो फैस’ला पश्चात परिवारले कुनै प्रतिक्रृया भने दिएको छैन ।
एम्माको रुखसँग विवाह गर्ने फै’सला सुनेर चिकित्सकले उनलाई डेंडोफीलिया नामको रो’गबाट पी’डि’त भएको बताएका छन् । यो रो’गका बि’रामी रुखप्रति यौ’न आर्कषण हुने गर्छन् ।
यसै कारण एम्माले रुखसँग विवाहको योजना गरेको बताइएको छ । यो पनि पढनुस काठमाडौं। एउटी युवती बेहुली बन्नुभन्दा ठिक अघि त्यतिबेला चकित परिन् जब उनलाई थाहा भयो कि उनकी आमाले पनि उनले बिहे गर्न लागेका युवकसँग प्रेम गर्छिन् ।
डेली मेलका अनुसार आफ्नो पहिचान नखुलाइ अस्ट्रेलियाकी एक युवतीले सामाजिक संजालमा आफ्नो दुःख पो’खेकी छिन् । युवतीका अनुसार उनको संसार त्यतिबेला तहसन’हस भयो जब उनले आफ्नी आमासँग आफ्नो बिहेमा सहभागी नहुनुको कारण सोधिन् ।
Prevअन्धा प्रेमी पाउँदा खुशी महिला ! खुलाइन् चार फाइदा
nextअाफ्नी प्रेमीकाको यस्तो अचम्मको बानी जब प्रेमीले थाहा पाए … प्रेमीको होस उड्यो !